हरियो शतावरी क्रीम - Thermomix व्यंजनहरु | ThermoRecines
Cremas40 मिनेट4 व्यक्ति
मैले यस्तो धनी शतावरी क्रीम को स्वाद कहिल्यै लिएको छैन! यो एक धेरै बनावट छ राम्रो र मलाईदार एकै समयमा तर बिल्कुल भरिएको छैन। साथै, asparagus तिनीहरू आहार को लागी आदर्श हो किनकि उनीहरु धेरै मूत्रवर्धक हुन्।
तपाइँ मध्ये धेरै लाई आश्चर्य छ कि यो कसरी प्रकाश छ यदि यो फोटो को सजावट मा क्रीम छ। हो, यो हल्का छ किनकि हामी एक Puleva ब्रान्ड खाना पकाउने क्रीम को उपयोग गर्दछौं कि मात्र ५% बोसो छ, १५ र १ 5% को बीचमा खाना पकाउने क्रीम को बाकी को विपरीत। यो महत्वपूर्ण छ नहटाउनुहोस् यो घटक, यो क्रीम मा मोटाई को एक स्पर्श जोड्दछ र एकै समयमा asparagus को सम्भावित बलियो स्वाद नरम को रूप मा।
मैले एक विशेष प्रकाश Thermomix® पाठ्यक्रम मा पहिलो पटक को लागी यो नुस्खा कोसिस गरें र मलाई यो मन पर्यो। म मेरी बहिनी को साथमा थिए जो, ल्याक्टोज असहिष्णु बिना, हरेक दिन एक डेयरी रहित आहार को लागी अधिक सहज लाग्छ। एक बिन्दुमा उनले सोधे कि क्रीम ल्याक्टोज बाट बच्न को लागी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ तर नुस्खा को क्रीमनेस गुमाए बिना? र त्यो हो जहाँ हामीले पत्ता लगायौं कि त्यहाँ तरकारी क्रीमहरु छन्, कि ल्याक्टोज नराख्नुहोस् असहिष्णु वा vegans को लागी।
म यहाँ बाट फाइदा लिन चाहन्छु धन्यवाद Beatriz, डी लास रोजास, हाम्रो दया र ब्लग मा उनको रुचि को समाधान मा उनको दया को लागी।
1 हरियो शतावरी क्रीम
क्रीमी, स्वादिष्ट, हल्का। यो क्रीम पनि छ।
कुल समय: 40M
हरियो शतावरी को दुई गुच्छा
G 30 ग्राम जैतुनको तेल
१ मध्यम प्याज (१ 1० ग्राम लगभग)
१ zucchini, खुली र काटिएको (g 1० g लगभग।)
तरकारी ब्रोथ को 600 ग्राम
१ चुटकी जमिन काली मिर्च
१ P175 ग्राम हल्का पुलेभा क्रीम वा कुकि। क्रीम
हामीले तेललाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १.
यस बीचमा, हामी asparagus धुनुहोस् र स्टेम को कडा भाग हटाउनुहोस्। हामी तिनीहरूलाई २ वा ३ टुक्राहरुमा विभाजित गर्दछौं र योल्क्स छुट्टै आरक्षित गर्दछौं।
Asparagus yolks जोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई sauté २ मिनेट, भेरोमा तापमान, काउन्टरक्लवर्क, चम्चा गति। एक पटक sautéed, हामी तेल हटाउन र तिनीहरूलाई आरक्षित बिना तिनीहरूलाई हटाउन।
काँचमा प्याज थप्नुहोस् र काट्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति4र त्यसपछि हामी फ्राई १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १.
त्यसपछि हामी गिलास र कार्यक्रम मा तोरी र शतावरी राखौं Seconds० सेकेन्ड, गति 4।
त्यसपछि हामी दौरान शिकार Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
शोरबा, नुन र मरिच र कार्यक्रम थप्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १।
पुलेभा लाइट क्रीम थप्नुहोस् (दुई चम्मच सजाउनको लागि आरक्षित गर्दै) र कार्यक्रम १ मिनेट, º ०º, गति 1.
हामी केहि मिनेट पर्खन्छौं तापमान थोरै ड्रप गर्न को लागी र हामी क्रश Minutes मिनेट, प्रगतिशील गति -2-१०।
तातो क्रीम को सेवा गर्नुहोस् र सुरक्षित शतावरी सुझावहरु र Puleva लाइट क्रीम को केहि बूँदाहरु संग सजावट।
थप जानकारी - उमालेको जंगली शतावरी
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, शासन, सूप र क्रिम, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सूप र क्रिम » हरियो शतावरी क्रीम
हरियो शतावरी र म राम्ररी सँगसँगै जान्छु, तपाईले त्यो धेरै स्वाद पाउनु हुन्छ कि उनीहरूसँग धेरै छ?
किनभने बनावट हिब्रू संग महान छ कि तिनीहरू हो।
थर्मोलाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, हामी यसलाई मन पराउँदछौं, यो धेरै हलुका छ र तपाईंले शतावरीको कडा स्वाद शायद याद गर्नुहुनेछ। मेरो श्रीमान जंगली शतावरीका हुनुहुन्न र उसलाई यो स्वादिष्ट लाग्यो।
त्यो क्रीमको सट्टा तपाईं आदर्श वाष्पीकरण गरिएको दूध प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ?? चुम्बनहरू
ममियाविलालाई जवाफ दिनुहोस्
यो अर्को विकल्प हो, जसले राम्रो टच पनि थप्न सक्छ। प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् कसरी।
कस्तो राम्रो देखिन्छ, सिल्भिया! खैर, यो मेरो चीज हो, वा यस वर्ष जंगली शतावरी धेरै महँगो छ ????
मनु, यो तपाईको सामान हैन, ती धेरै महँगो छन् तर म तिनीहरूलाई माया गर्छु र यो क्रीम महान बाहिर आयो। म यो नगरीकन प्रतिरोध गर्दिन, म यो सिफारिस गर्दछु।
मेरो समर्पण को लागी धन्यवाद। उत्कृष्ट व्यंजनहरु र प्रस्तुतीकरण। म एक नौसिखिया हुँ रूपमा म अलि अलि जान्छु तर म निश्चित छु कि म थर्मोमिक्स र तपाईंको ज्ञान प्रयोग गरेर रमाईलो गर्नेछु।
तपाईका शब्दहरूका लागि धेरै धन्यबाद, हामी सरल व्यंजनहरू राख्नेछौं जुन हामी सबैलाई मद्दत गर्दछ।
शुभ रात्री, म तपाईं र तपाईंको व्यंजनहरु संग खुसी छु। मसँग एक बर्ष भन्दा बढि थर्मोमिक्स रहेको छ तर नयाँ टेक्नोलोजीहरू मसँग धेरै जाने छैनन् तर प्रत्येक दिन म तपाईंको पृष्ठमा प्रवेश गर्दछु र म द्रुत व्यंजनहरू प्रतिलिपि गर्दछु, अहिले नै मैले भर्खरको पेड्रो Ximenes सॉसको साथ टेन्डरलोइन बनाईएको छु र पिन्ट उत्कृष्ट छ। । धेरै धेरै धन्यवाद।
म धेरै खुसी छु कि तपाईं हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ। तपाईं हामीलाई बताउनुहुन्छ कसरी चटनी संग निविदा थियो, हामी यो प्रेम गर्दछौं।
घोटाला टेंडरलोइन, म Villamanrique (सेभिल) का हुँ र आज हामी Andalusia दिवस मनाउँछौं र उनीहरूले पहिले नै मलाई बधाई दिएका छन्, मैले ट्युना इम्पानाडा पनि बनाए र यो विलासितापूर्ण छ। मलाई चुम्बन उत्तर दिन को लागी धन्यवाद
मि। कार्मेन भन्यो
तपाईको व्यंजनहरुका लागि धेरै धन्यबाद। मलाई यो मन पर्छ। म यस शतावरी क्रीम बनाउने योजनामा ​​छु, मलाई कलेजरी हटाउनको लागि मलाई क्रीमको विकल्प किन आउँला भनेर मलाई थाहा छैन।
मलाई जवाफ दिनुहोस्। कार्मेन
एम। कार्मेन, यो क्रीम हल्का छ, तपाईंसँग क्रीम 5% फ्याटको साथ नयाँ छ, जुन एकदम थोरै छ र यसले एक आदर्श स्पर्श दिन्छ। यो प्रयास गर्नुहोस् र मलाई तपाईको बिचार के बताउनुहोस्।
म यो प्रकाश कोर्समा पनि थिएँ र यो एकदम राम्रो देखिन्थ्यो, शतावरी क्रीमले मलाई मंत्रमुग्ध बनायो, तर मलाई के कुरा मनपर्‍यो त्यो राम्रो जडिबुटीको साथ खरायो थियो, वास्तवमा, मैले यो बिहान खाजाको लागि गरें र यो स्वादिष्ट थियो ... अभिवादन।
FLORI लाई जवाफ दिनुहोस्
यी पाठ्यक्रमहरू रमाइलो हुन्, यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्नुको अलावा, हामीले यसलाई प्रयास गर्‍यौं र हामी सबैको बीचमा धेरै नयाँ विचारहरू योगदान गरिन्छ।
प्राप्त गर्नका लागि धन्यवाद अति नै असल र फरक छ
एन्जेलिनलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले हाम्रो एन्जाइलान्स व्यंजनहरु मन पराउनुभयो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद। शुभकामना
म तपाईंको ब्लगमा छु! ... कस्तो भ्रम !! 😉
मैले तपाईंलाई भेटेपछि मैले भनेको थिएँ, म तपाईंको सब भन्दा ठूलो फ्यान हुँ। म धेरै खुशी छु म सहयोगी भएको थिए।
यो क्रीम स्वादिष्ट छ। मेरो केटाले पनि शतावरी देख्न सक्दैन र जब मैले यो नुस्खा बनाएको थिएँ, मैले उसलाई यो जुचिनी हो भनेर बताएर उसलाई छल गर्नुपर्‍यो कि उसले यसलाई चलाउन सक्छ ... ऊ एक पटकमा दुई कचौरा खाँदै अन्त भयो!
मलाई तपाईंको ब्लग मन पर्छ!
धन्यवाद बी, तपाईको ठूलो योगदानका लागि र यस्तो वफादार अनुयायी हुनको लागि। म खुसी छु कि तपाईं हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ र उनीहरूसँग नयाँ चीजहरू बनाउनको लागि तपाईं प्रोत्साहित हुनुहुन्छ।
एक ठूलो चुम्बन र म तपाईलाई एक भन्दा बढि पाठ्यक्रममा भेट्ने आशा गर्दछु। यो खुशी थियो!
मारि कारमेन भ्याक्वेरो भन्यो
मलाई asparagus मनपर्दैन, राम्रोसँग हरियो तिनीहरू भन्छन्। न त कोलाबसीन गर्यो तर मैले तपाईंको क्रीम बनाएँ र यो वास्तवमै राम्रो छ त्यसैले म शतावरीको साथ हिम्मत गर्न जाँदैछु किनकि यससँग पिन्ट छ ..... म तिमीलाई यसको बारेमा भन्नेछु।
MARI CARMEN VAQUERO लाई जवाफ दिनुहोस्
निश्चित रूपले तपाईंलाई यो मनपर्‍यो किनभने मैले यो पहिले नै धेरै चोटि मानिसहरूसँग प्रयोग गरिसकें जो तपाईं भन्नुभए अनुरूप हरियो छन् र तिनीहरूलाई यो मनपर्‍यो। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ।
शतावरीका सल्लाहहरू जुन तपाइँ सजावटको रूपमा राख्नुहुन्छ, म पनि यसलाई क्रीममा थप्न सक्दछु यसलाई लामो समय सम्म बनाउनको लागि ???
तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
म तपाईंको सबै व्यञ्जनहरू मन पराउँछु !!! .. तपाईं महान हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई चिन्छु भनेर चिन्छु, हरेक पटक जब तपाईंबाट ईमेल प्राप्त गर्दछु, आनन्द मेरो शरीरमा प्रवेश गर्दछ जुन तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। म धेरै शेफ हुँ र सत्य यो हो कि तपाईले पठाउनुभएका सबै व्यञ्जनहरू हो, मसँग धेरै थोरै छन्।
तपाईको कामको लागि धन्यबाद।
Mamen लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, मलाई यो विचार मनपर्छ, मसँग फ्रिजमा asparagus को ट्रे छ जसले मलाई "यहाँबाट बाहिर निकाल्नुहोस् yaaaa !!
र यो नुस्खाको साथ यो सुरक्षित छ, जहिले जहिले म मियामीमा कुनै पनि घटक पाउन सक्दिन र यस पटक यो तरकारी क्रीम हो, म अरू के कुरा राख्छु त्यो उज्यालो छ?
स्किम्ड दुध ??, वाष्पीकरण कम फ्याट? म यहाँ वरिपरि देखेको अरू धेरै कुराको बारेमा सोच्न सक्दिन, के यो समान रकम हुनेछ?
खैर, गत हप्ता मैले खरानीलाई (चीनाबाट) राम्रो जडिबुटीले बनाएको थिएँ र यो स्वादिष्ट थियो, म यसलाई प्यारेक्समा रोटीसँगै लगें र मेरो श्रीमान्हरूले यसलाई चूसे र मोजेटे बनाए।
तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद !!
सुसानलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, शतावरी कति हो? तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, बधाई छ
चारोलाई जवाफ दिनुहोस्
चारो, अहिले मसँग घरमा ग्राममा शतावरीको गुच्छहरू छैन तर मलाई लाग्छ कि प्रत्येक गुच्छा gr०० जीआर छ, अर्थात 400०० ग्राम बढी वा कम यस नुस्खाको लागि।
नमस्ते सिल्भिया, मैले बुझें कि तपाई लेटस क्रीम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, कृपया कृपया नुस्खा राख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंलाई यो थाँहा छ भने, म यसको कदर गर्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। चुम्बनहरू।
मारिसा, मैले यो कहिले पनि बनाइनँ तर मैले तपाईंको लागि विधि पत्ता लगाएँ। मैले तपाईंको लागि लिंक राखें।
मलाई लाग्ने सबै रेसिपीहरू मलाई मन पर्छ, तिनीहरू उत्कृष्ट छन् तर तिनीहरू कम तेलले बनाउन सकिन्छ, तिनीहरू पनि राम्रो हुनेछन्
Rita लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै व्यंजनहरुमा म सामान्यतया तेलको मात्रा थोरै कम गर्दछु र ती धेरै राम्रो छन्। यो परीक्षण गर्नुहोस्।
सिल्भिया, धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यत्तिको चाँडो जवाफ दिनु भएकोमा, तपाईं महान हुनुहुन्छ, भोली म यो गर्नेछु, किनकि मैले बिक्रीमा धेरै सलादहरू किनें, र हामीलाई यो धेरै मनपर्‍यो, र मैले यो कसरी गरें भनेर मलाई याद छैन, मैले भने, धेरै धेरै धन्यवाद, चुम्बन।
तपाइँले हामीलाई भन्नुभएको छ कि यो तपाइँको लागि कस्तो भएको छ।
मैले यो "सप्ताहांत" गरेको छु र यो एक ठूलो सफलता भएको छ ... मैले तपाईंको वेबसाइटमा गर्ने सबै कुराहरू जस्तै।
बधाई छ र कहिल्यै रोकिदैन !!!
पेपी, घरमा यो क्रीम हाम्रो मनपर्नेहरू मध्ये एक भएको छ र मेरो श्रीमान शतावरीबाट बनेको छैन। शुभकामना
मैले यसलाई भोलीको लागि बनाएँ, यसमा कुनै क्रीम थिएन र मैले ques स्किट्स प्रयोग गरें। धेरै राम्रो !!!
एस्तरलाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो क्रीमरी रमाईलो! यो स्वादिष्ट छ मैले यसलाई भोली खानाको लागि तयार गरेको छु।
जुआना मैरी भन्यो
आज मैले यो स्वादिष्ट क्रीम बनाएको छु, र सत्य यो हो कि हामीलाई यो धेरै मनपर्‍यो, यद्यपि मैले शतावरी किल्लाको अलिकता याद गरें, हुन सक्छ किनकि मैले श्रोपको मात्रा घटाएको हुनाले यसलाई मोटा बनाउने हो कि? धेरै राम्रो थियो बच्चालाई पनि।
जुआना मरियमलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ जैविक सोया र ओट क्रीमहरू छन्। विशेष गरी, प्रोभेमेल (सेन्टीवेरी) बाट सोयाबीन शानदार छ। ध्यान राख्नुहोस् कि सोया सबैभन्दा सामान्य ट्रान्सजेनिक खाना मध्ये एक हो त्यसैले लेबल "जैविक" महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले यसलाई अंग्रेजी अदालतको सुपरमार्केटमा बेच्छन्
मरुसालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, मैले यो नुस्खा धेरै समय अघि प्राप्त गरिसकेको छु र यसले मेरो ध्यान खिचेन।
तर अर्को दिन मेरो ससुराले एस्पेरागसले भरिएको झोला देखाए, कल्पना गर्नुहोस्, मैले पोलेको शतावरी, सिष्टारि शतावरी, शतावरी जोपा (अण्डलुसियामा एकदम विशिष्ट) बनाएको छु, तर मँ अझै पनि शतावरी छ।
ठिकै छ, म ब्लग मा नुस्खा को लागी र म धेरै भ्रम बिना यो बनाउन हिम्मत (म स्वीकार)।
मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो यस नुस्खाको साथ, यो धेरै नरम र स्वादिष्ट छ, हो, स्वादिष्ट छ।
म तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछु कि मँ मौसमको अवधिमा यसलाई एक पटक भन्दा बढी दोहोर्याउछु। र सबैभन्दा माथि, यो हल्का छ !! तपाईले अरू के केहि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेरि खानाको आनन्द उठाउनको लागि धन्यबाद।
मारिया, म स्वीकार्छु कि जब मैले यो रेसिपी पहिलो पटक देखेको थिएँ, यसले धेरै ध्यान पनि आकर्षण गरेन, तर एक चोटि प्रयास गरे पछि म खुसी भए, वास्तवमा म फ्रिजमा शतावरीका केही गुच्छहरू छन् जुन पर्खिरहेका छन्। मलाई क्रीम तयार गर्न।
नमस्ते केटीहरू म तपाईंलाई व्यबस्थामा गरेको परिवर्तनको बारेमा बताउन चाहान्छु, कारण, म आहारमा छु र घरमा मेरो हल्का क्रीम थियो भने (११%) मैले यसलाई दबाउने निर्णय गरें, मैले यसलाई बदल्दैछु स्किम्ड दुध र स्किम्ड दुध पाउडर (कुल १ 11 ग्राम) मलाई यो थाहा छैन कि यो क्रीमको साथ कसरी हुनेछ तर यो उत्तम थियो कि मैले यो चाल सम्झें जुन तपाईंले मलाई दिनुभयो यो मलाई यहाँ वाष्पीकरण गरिएको दूध भेटिएन।
त्यसोभए केहि छैन यदि कसैले अरु क्यालोरीहरू हटाउन चाहन्छ भने, तपाईलाई थाहा छ ... तपाईका व्यंजनहरुका लागि पुन: धन्यबाद
यो त्यस्तो हो कि राम्रो टुडूडू
यो विधि राम्रो देखिन्छ, म घरमा खाना खाएको छु र म यसलाई बनाउन चाहान्छु तर मलाई केही शंका छ। तरकारी ब्रोथ तरल वा गोली किन्नुहोस् वा यो गरिनु पर्छ र अर्को शतावरी सजाउनको लागि कच्चा, पकाएको हुन्छ ...
म सामान्यतया पानी र एक तरकारी स्टक क्यूब र सजावटी शतावरी को साथ पहिले शोरबा बनाउँदछ कि तपाईं तिनीहरूलाई पिसाउनु अघि लिनुहुन्छ।
बन्द गर्नुहोस् भन्यो
के कसैले अंडे सेतोको लागि क्रीम परिवर्तन गर्न को लागी कोशिश गर्यो?
CAPOTE लाई जवाफ दिनुहोस्
जस्तो कि ... नुस्खा बाहिर मीठो आउँछ !! Asparagus yolks sautéing को विचार पछि तिनीहरूलाई क्रीममा राख्न सक्षम हुनु राम्रो हो। मैले यसको साथ लहसुन क्रउटन्स र एक बर्षा जैतूनको तेल…। शानदार !!! धन्यवाद!!
PETER लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद पत्रुस 😉
धेरै राम्रो नुस्खा !! शाकाहारी क्रीमको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहान्छु। मर्काडोनाको तरकारी क्रीमको साथ सावधान रहनुहोस् किनकि यो पाम तेल सहित वनस्पति तेलले बनाइएको हो जुन खजूरमा धेरै कोलेस्ट्रोल हुने भएकोले अब हल्का बनाउने विधि छैन। म बदाम वा सोया वा दलियाको क्रीम प्रयोग गर्दछु जुन उनीहरू कुनै पनि जडिबुटीमा बेच्छन् र यो स्वस्थ हुन्छ।
नमस्ते, मलाई थाहा छ "दुई गुच्छा" कति हो, मसँग ७५० ग्राम झोला छ। र मलाई थाहा छैन कि कतिवटा एस्पारागस एक गुच्छामा जान्छ, किनकि म कल्पना गर्छु कि तिनीहरू आकारमा निर्भर हुनेछन्।
गुच्छहरू लगभग about०० ग्राम जति छन्। त्यसोभए पकाउने विधिका लागि तपाईंलाई 400०० ग्राम आवश्यक छ।
नमस्कार! आज मैले चिठीमा नुस्खा बनाएको छु र यो जस्तो स्वाद छैन। मैले asparagus तौल कति याद गरेन किनकि मैले २ गुच्छे लगाए, यो मसँग छ।
जे भए पनि, क्रीम बचत गर्न वा यसलाई फ्याक गर्न कुनै विचारहरू?
हर्मीलाई जवाफ दिनुहोस्
प्यापिलोटमा समुद्री बास